Apple dia manomboka mivarotra modely Apple Watch Series 3 miverina miverina | Avy amin'ny mac aho
Taorian'ny fanavaozam-baovao tao amin'ny Apple's Official Refurbished Store (US Exclusive), ilay orinasa monina ao Cupertino vao nanampy maodely vitsivitsy an'ny Apple Watch Series 3. Sambany ny orinasa amerikana avaratra no namidy ny famantaranandro marani-tsaina ny marika ho vokatra reconditioned, taorian'ny lesoka kely hita tao amin'ny orinasa.
Azo tsapain-tanana ny fihenam-bidy, eo amin'ny $ 50, izay midika fihenam-bidy 15% eo ho eo. Marihina fa, amin'izao fotoana izao, tsy misy ny maodely natolotra manome ny mety hisian'ny fifandraisana LTE.
Ireto misy modely misy amin'izao fotoana izao:
38mm Apple Apple Watch miaraka amin'ny tarika Pink Sport: tonga amin'ny vidiny $ 279; vidiny taloha $ 329.
42mm Apple Watch Space Gray Aluminium miaraka amin'ny Black Sport Band: amin'ny vidiny 309 $; vidiny taloha $ 359.
Ny Apple Watch Series 3 dia natomboka tamin'ny volana septambra 2017, miaraka amin'ireo maodely iPhone vaovao, ary izy no modely voalohany manolotra safidy miaraka amina LTE namboarina. Amin'izao fotoana izao, ity modely ity dia mbola tsy namidy ho vokatra nohavaozina, fa fanavaozana ny orinasa misy ny singa misy ary koa ireo maodely matetika, koa raha tena liana amin'ny iray amin'ireo vokatra ireo ianao dia tsara ny hitandremana ny fihetsiketsehana mety hitranga.
Ireo karazana fahafaha-manao tsena ireo dia fotoana mety alaivo amin'ny vidiny ambany ny vokatra kintan'ny orinasa tamin'ny famoahana azy teny an-tsena. Amin'ity tranga ity, ny tahiry amin'ny maodely roa dia tokony ho 50 $.
Araka ny fantatsika, ny vokatra nohavaozina rehetra, mandalo dingana henjana sy fifehezana henjana eo aloha hatolotra ho an'ny besinimaro. Toy ny vokatra Apple rehetra, ireo maodely rehetra ireo dia misy antoka maharitra herintaona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple dia manomboka mivarotra modely Apple Watch Series 3 nohavaozina